Anyị na-enye ndị ọrụ mmemme omume anyị na otu ndị a:
Ndị ọbịa na-eme ihe ngosi
Ndị na-enyere aka Bọọbụ Booth
Eventlọ ọrụ na-akwalite ihe omume
Onye na-eme ogbako
Eventdị Ihe Omume Egwuregwu
Ntughari ihe ngosi
Ndị Ngosipụta Ngwaahịa
Ndị na-eme njem maka okporo ụzọ
Ndị otu na-eme ihe ngosi
Ndị na-eme ngosipụta
Ndị ọrụ Ndebanye aha Ihe Omume
Ndị na-ahụ maka ihe omume
Ndị Na - eme Mgbasa Ozi
Ilekọta Ndị ọbịa
Nna ukwu nke ememe
Ndị na-eweta Tradeshow
Maka ihe ndị ị chọrọ, biko kpọtụrụ anyị Ma n'ime ememme ma ọ bụ ihe omume, ndị ọrụ na-anọchite anya ụlọ ọrụ gị.
Boolọ ebe ihe ngosi na-adị n'usoro dị iche iche na-egosi ụlọ ọrụ gị ọ bụghị naanị na Belgrade, kamakwa ọ bụ kaadị ndị ọbịa maka ndị ọbịa mba ụwa. Anyị na-ewere nhazi nke ọdịdị gị ọfụma ọ bụghị site na aka gị kama anyị na-akwado gị ike na obere nkọwa iji mejupụta echiche gị.
A zụrụ ndị ọbịa anyị na ndị bịara ileba anya kpọmkwem ma nwee asambodo PC pụrụ iche na asụsụ mba ọzọ.
Ndị otu anyị na-agba mbọ hụ na ngosipụta gị dị mma na ihe omume ga-aga nke ọma.
Agbanyeghị, anyị echefula ihe ndị merela ka anyị nwee ihe ịga nke ọma: Afọ Ojuju Ahịa dị ka ihe kachasị mkpa, nlekọta onwe onye na mmesi obi ike dị ka isi okwu.
Nwere ezigbo ngwaahịa ma ịchọrọ ịbawanye visibiliti na ebe a na-ere ahịa?
AGENCY SNOB na-enyere gị aka na nhazi, nhazi na ntinye nke nkwalite ahịa.
Maka oge ugbu a anaghị ere onwe ya, anyị na-ahụ Nkwalite, nke bu n’uche. Ndị ọrụ nkwalite anyị bụ maka nke a ọzụzụ ọzụzụ Corporate ngwaahịa, ọzụzụ ahịa na mkpali kachasị nke ọrụ.
Mgbasa mgbasa ozi na-aga nke ọma na-eme ka uru ụlọ ọrụ gị na ngwaahịa gị bara uru. Nwere ike ị nweta ndị ahịa n'otu ụdị adreesị, adreesị ọhụrụ, wee merie ndị ruru eru jikwaa.
Nkwado nke ọma maka ngwaahịa gị ka akwadoro nke ọma site na nkwalite ọhụụ ma na -eme ka ị nwekwuo mmata.
N'ime ihe karịrị afọ 7 na ụlọ ọrụ ahụ, anyị amụtala na ihe nzuzo nke ihe ịga nke ọma maka ihe omume bụ ndị otu na ndị ọbịa ndị nwere aka ọrụ, ndị a na-ejikọ aka ọnụ, na ebe ahụ iji nyere onye ahịa aka site na ọrụ ndị ọbịa ha. n'ụzọ niile. Anyị nwere ike iji nganga kwuo na anyị ahụla mkpa nnabata / nnabata ọ bụla dị n'ahịa a na-eto eto.
Ọrụ ndị kachasị ewu ewu:
Mmemme na emume
Anyi bu ndi okacha mara ijikwa ihe omume: maka ndi ochichi na ndi ahia, anyi nwere ndi ọbịa na ndi nnabata nwere mmasi n’ememe akwukwo. Na mgbakwunye na ngosipụta mara mma na omume dabara na ihe omume ahụ, anyị na-ekwusi ike na ihe pụrụ iche a chọrọ na ihe omume a na iwu nchedo ya.
N’ebe a na-eme n’otu akuko na ihe omume a na-eme, ndị ọrụ ibe anyị ga-anabata ndị bịaranụ, jiri nwayọ jiri nkwanye ugwu lekọta ndebanye nke ndị nnọchi anya, ma nyere aka n’ịkpọ okwu n’oge ememme ahụ.
Ma ọ bụ otu ụbọchị ma ọ bụ ụbọchị iji nwee nzukọ, ndị ọrụ ibe anyị ga-anọ ya n'oge niile, site na nkwadebe ruo na njedebe nke ihe omume ahụ, ma dị njikere inye aka na nsogbu ọ bụla nwere ike ibilite.
Ngosipụta na ngosipụta nke ụlọ na nke mba ọzọ
Anyị nwere ike iji obi ike kwuo na otu anyị na-ejide nke ya n'ihe omume ọ bụla, ma ọ bụ na Hungary ma ọ bụ na mba ọzọ. Anyị na-edebanye aha ma na-anabata ndị ọbịa, na-enyere ụlọ aka na họtel, na-enye ozi gbasara usoro ihe omume maka ihe omume ahụ, na-ekesa akụrụngwa ịkọwa - n’okwu, anyị na-eme ihe niile iji mee ka afọ ju ma ndị ọbịa ma ndị nhazi.
NWAANYI INWE INI NIILE
HORECA ELUPARA FAIR
OGWU GI NA-EGO FAIR
NKWUKWU EGO NA-EKWU NKWUKWU EGO NA-EGO - CACIB BELGRADE
NWAANY NA INWE INWE, NA-EGO NA-EGO
METOR Gosi (OICA)
UGBU AGBANYI NWA
Hlọ ihe ọkụkụ na - enweghị ego
Mba mkparịta ụka na ọrụ nke COSMETICS, HAIRCARE, Agụmakwụkwọ na ahụike.
NZUKWU EGO NA-EGO ANA IGBO FAIR
IRM FAAKA ụmụaka
INTERNATIONAL FAIR OF TECHNIQUE NA AKWCHKWỌ AKW (KWỌ (UFI)
IGBO AKWUTKWỌ AHUTR F EGO NA-EGO
AKEFKỌ AKHKỌ EGO
EGO, MARA NA EGO NA AGBANWE IME - GRAFIMA
NWAANYI INWE NA IZUZU ANYA AKUKO FAIR - BIROEXPO
AKWHKWỌ AKW EXKWỌ EKPERE NA NKWUP ANDTA
AK PRKỌ gburugburu ebe obibi na ihe ndị ọzọ e kere eke FAIR - ECOFAIR
NJIKWU EGO MBALITE
AKW FAKWỌ AKW FAKWỌ BELGRADE FAIR
FAIR NKE EGO NA AKPATARA EGO
BELL FAIR - EDUCU FAIR
FAIR IN INFORMATION, NA-AK ANDZI NA AHARK
AK FAKỌ UKWU FBỌCH F, AKWQUKWỌ NA AKW INKWỌ INLỌ (UFI)
AK EXKỌ MACHINES, AKOLKỌ NA AKW MATKWỌ AKW FORKWỌ AKW FORKWỌ AKW FORKWỌ AKW FORKWỌ AKW (KWỌ (UFI)
FAIR NIILE NA EGO